ICuraçao yongeza uvavanyo lwe-antigen yendawo kwiimfuno zokungena kubakhenkethi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeCuracao Breaking News » ICuraçao yongeza uvavanyo lwe-antigen yendawo kwiimfuno zokungena kubakhenkethi
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Iindaba zeCuracao Breaking News • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
ICuraçao yongeza uvavanyo lwe-antigen yendawo kwiimfuno zokungena
ICuraçao okwangoku ijolise ekunciphiseni inani le-COVID-19 yamatyala kwesi siqithi
Abasemagunyeni eCuraçao bayaqhubeka neenzame zabo zokugcina isiqithi sikhuselekile kuzo zombini iindwendwe kunye nabantu balapha
Uvavanyo lwe-antigen yosuku lwesithathu luyafuneka kubo bonke abahambi abangena eCuraçao
Ukwenza idinga lokuvavanywa kwe-antigen linyathelo elihlanganisiweyo lokubhalisa ngempumelelo kwiKhadi leNgcacisi yoMkhweli
Ukusukela nge-20 ka-Epreli, abahambi abaya eCuraçao bevela kumazwe asemngciphekweni omkhulu, abangakhange bafumaniswe ukuba bane-COVID-19 kwiinyanga ezi-6 ezidlulileyo, kufuneka benze uvavanyo lwe-antigen kwilabhoratri yendawo ngomhla wesithathu wokuhlala kwabo.
Curaçao ngoku ijolise ekwehliseni inani le-COVID-19 yamatyala kwesi siqithi. Kwangelo xesha, abasemagunyeni baqhubeka nemizamo yabo yokugcina isiqithi sikhuselekile kuzo zombini iindwendwe kunye noluntu lwengingqi. Imfuneko yokuthatha uvavanyo lwe-antigen kusuku lwesithathu lokuhlala kwabo yinto eyongezelelweyo ngenxa yale mizamo.
Uvavanyo lwe-antigen yosuku lwesithathu luyafuneka kubo bonke abahambi abangena eCuraçao kwaye longezwa kuvavanyo lwe-PCR olunyanzelekileyo. Uvavanyo lwe-PCR kufuneka lwenziwe kwisithuba seeyure ezingama-72 ngaphambi kokumka kwilabhoratri eyamkelweyo.
Ukwenza idinga lokuvavanywa kwe-antigen linyathelo elihlangeneyo lokubhalisa ngempumelelo kwiKhadi leNgingqi yoMkhweli. Eli linyathelo lokugqibela lenkqubo yobhaliso kwi-dicardcuracao.com
Abahambi banokukhetha phakathi kweelebhu ezininzi zasekhaya.
Iziko lewebhu livumela iindwendwe ukuba zigcwalise iKhadi leDigital Immigration Card, zigcwalise iKhadi leNqanawa yabahambi kwisithuba seeyure ezingama-48 zokumka kwaye ulayishe iziphumo zovavanyo olubi kuvavanyo lwe-PCR lwaphambi kokuhamba.